Dungeon Hunter 5 dia mahazo fanavaozana atiny lehibe | Vaovao IPhone
Dungeon Hunter 5 dia nahazo fanavaozana atiny lehibe
Na dia tsy ampahany tsara indrindra amin'ny saga aza izany, Trano-maizina Hunter 5 Manana mpankafy be dia be izy ary ny fomba tokana hitazomana azy ireo dia ny manampy votoaty bebe kokoa amin'ny lalao. Navoaka tamin'ny volana febroary lasa teo ary lasa tohiny mivantana an'ny Dungeon Hunter 4, ity lalao filalaovana andraikitra ity vao nahazo fanavaozana lehibe tamin'ny endrika fanitarana.
"Xinkashi Unleashed", izay no nanamasinan'izy ireo ny fanitarana, manampy scenario vaovao dimy ao amin'ny trano mimanda ao anatin'izany ny fandrika, ny misiona vaovao, ny fitaovam-piadiana vaovao, ny fiadiana vaovao ary ny vaovao amin'ny lafiny rehetra.
Ity fanavaozana atiny ity dia mitondra antsika atmosfera izay hahatonga antsika hahatsapa ho toy ny any atsinanana atsinanana, miaraka amin'ny toe-javatra isan'andro vaovao amin'ny sary sy tapakila vaovao azo raisina mba hahazoanao fitaovam-piadiana mahery vaika Xinkashi.
Ho fanampin'ny iraka isan'andro, dia ao anatin'ity fanavaozana ity ihany koa fanamby vaovao isan-kerinandro izay ahafahantsika mandray anjara amin'ny fahazoana fiadiana sy fitaovam-piadiana vaovao avy amin'ny "sefo" sasany (boss), ary koa efa nampidirina iraka tsirairay. Araka ny hitanao raha efa mpilalao Dungeon Hunter 5 ianao, be dia be ny vaovao sy fanatsarana nampiana izay hahatonga ny traikefa tsy hitovy mba hilalao indray toa ny fizarana vaovao.
Raha tianao ny lalao filalaovana andraikitra, ary na dia efa nilaza aza izahay fa tsy ny tsara indrindra amin'ny saga ity, dia andrana izany. Mazava ho azy, raha manana toerana amin'ny iPhones anao ianao satria lalao 801mb izay mety vao mavesatra aza rehefa mandeha ny fotoana. Ny lalao dia maimaimpoana amin'ny fividianana fampiharana Mba hahafahana mivoatra haingana kokoa dia mila iOS 7 na taty aoriana ary havaozina ho an'ny iPhone 6 sy iPhone 6 Plus.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Dungeon Hunter 5 dia nahazo fanavaozana atiny lehibe
Inona no azon'ny Apple Watch atao raha tsy misy iPhone mifandray amin'ny tamba-jotra WiFi?